Fuula Taattoo-Masaka kana irratti madda qeenxee hangii deetaa filuu ni dandeessa. Hangiin kun hangii man`eewwan reektaangulaarawaa tokkoo ol irraa ijaaramuu ni danda`a.
Yoo hammanga deetaa iirratti too`anna caalu barbaade fuula Taattoo Masaka - Deetaa Walfaannee gargaarami.
Hangii deetaa ifteessuuf
Hangii deetaa fili. Kanneen armaan gadii keessaa tokko hojjedhu.
Qaaqa Calc keessatti gadeessuuf, hammanga deetaa fili cuuqaasi, itti aansuudhaan hammangaa deetaa filuuf harkisi.
Hammangaan deetaa akka moggaasa terree duraa ykn tarjaa duraa ykn lamanuu keessatti qabu mirkaneessi.
Durargii keessatti taattoon dhumaa maal akka fakkaatu ilaaluun ni danda`ama.
Title is: Taattoo Masaka - Hangii Deetaa